Amakhadi Ahlawulwe Kwangaphambili | Ucanzibe 2022
Amakhadi ezipho eVisa angenayo imali yokuqalisa
Udidi Amakhadi Ahlawulwe Kwangaphambili
Amakhadi ezipho eVisa sisipho esifanelekileyo kuye nawuphi na umntu owamkelayo, ngaphandle kwetyala, kuba zinokusetyenziselwa ukungabinangxaki ngabathengi, abasebenzi, abahlobo okanye ...
Isikhokelo kwiiKhadi leZipho zeVanilla Visa
Amakhadi eZipho zeVanilla Visa anokusetyenziswa kwi-Intanethi kwaye naphi na eMelika okanye kwiSithili saseColumbia apho kwamkelwa amakhadi ebhanki eVisa. Esi sipho esihlawulelwa kwangaphambili ...
Indlela yokujonga ibhalansi kwiWalmart MoneyCard
IWalmart MoneyCard yikhadi elihlawulelwayo elihlawulelwayo elinceda abathengi bahlale ngaphezulu kwezezimali zabo. Ngapha koko, abanini bamakhadi baneendlela ezininzi ...
Indlela yokujonga ibhalansi kwiKhadi leZipho laseMelika
Ungajonga ngokulula ikhadi lakho lesipho laseMelika kwi-Intanethi okanye ngokwenza umnxeba wasimahla. Qiniseka ukuba uyayiqonda indlela ibhalansi yakho efumanekayo ...
Amakhadi okuTyala ahlawulelwe kwakhona
Iinkampani ezibonelela ngamakhadi okutsala imali angaphinde alayishwe athi imveliso yabo ikunika ukufikelela kwimali ngaphandle kwemfuneko yokuveza ubuqu bakho ...
Zeziphi iivenkile ezithengisa amakhadi okuhlawula ityala?
Amakhadi ebhanki ahlawulwa kwangaphambili afumaneka ngokubanzi kwiivenkile ezahlukeneyo, ukusuka kubathengisi beebhokisi ezinkulu nakwiivenkile zeziyobisi ukuya kwizikhululo zegesi kunye nakwiivenkile zedola. ...
Sebenzisa iiKhadi zeZipho zeBhanki yaseMelika njengezinto ezikhuthazayo
IBhanki yaseMelika iMerrill Lynch Visa Rewards Card yeyona ndlela ilungileyo yenkampani yakho yokubonisa umbulelo kubasebenzi abasebenza nzima. La makhadi anokuba ...
Apho unokufumana khona iiKhadi zeZipho zaseMelika zokuBonisa
Ikhadi lesipho laseMelika Express linikezelwa ngeendlela ezahlukeneyo, ukusukela kwikhadi lesipho eliqhelekileyo ukuya kumakhadi ezihlandlo ezizodwa. Ukwengeza kwi ...
Isikhokelo seeKhadi ezihlawulelwa kwangaphambili zeWalmart
I-Walmart MoneyCard yikhadi ledebhithi elihlawulelwa kwangaphambili elinikezelwa ngumthengisi omkhulu kwiivenkile zabo zasekuhlaleni nakwi-intanethi. Eli khadi liyafumaneka kwilizwe liphela kwaye linokusetyenziswa ...
Ulujonga njani ibhalansi yeKhadi leZipho
Amakhadi ezipho zeVisa sisipho esifanelekileyo kuwo nawuphi na umsitho. Zingasetyenziswa kuye nawuphi na umthengisi owamkela amakhadi etyala eVisa. Ukugcina umkhondo wekhadi ...
Akukho makhadi ahlawulwa kuqala
Akukho makhadi etyala abhatalwa kwangaphambili abonelela ngokunikwa kwezipho kunye nezibonelelo zohlahlo-lwabiwo mali. Kulungiselelwe abo bafuna indlela efikelelekayo yokunikezela ngoku okwahlukileyo, oku kutsalwa ...
Iinkonzo kunye neengozi zeKhadi leZipho ezihlawulelwa kwangaphambili
Ukuba ujonge isipho salo mhlobo okanye ilungu losapho ekunzima ukusithenga, ikhadi lesipho seVisa esihlawulelwa kwangaphambili linokuba lukhetho olukhulu. Abantu abaninzi bathanda uku ...
Amakhadi ePetroli ahlawulwa kwangaphambili
Ukuba ujonge indlela yokwenza uhlahlo-lwabiwo mali ngokukuko ngeendleko zepetroli, ikhadi lamafutha elihlawulelwa kusenokwenzeka ukuba kufanelekile ukuba ulithathele ingqalelo. Zikwalungele nabaqhubi abancinci, ...
Isikhokelo se-ADP Aline Pay Card
I-ADP Aline Pay Card sisixhobo esisetyenziswa ngamashishini ukuhambisa umvuzo kubasebenzi endaweni yokujonga ngqo idiphozithi kunye nokuhlolwa kwamaphepha. Isebenza njenge ...
ilungisiwe isitatshi sokutya esingalunganga kuwe
Bukela imovie ye-hindi ngemibhalo engezantsi yesiNgesi
Chaza into eyenziwa ngabantu ukwenza umthambo
ungasebenzisa iblitshi kwimpahla enemibala
abantu baqale nini ukunxiba impahla yangaphantsi
injani indoda taurus
ubunzima obuphakathi bendoda eneminyaka eli-16 ubudala
Iindidi E Zomzimba Ubugcisa